July 4, 2020 - PARIJATMEDIA
अवस्य पढ्नुहोला ,म सु’तेको थिए , मेरी श्रीमतिले मेरो टाउको मालिस गरीरहेकी थिइन ,म बिस्तारै – बिस्तारै निदाए जागेपछी उनले निधारमा भिक्स लगाइदिइन मेरो आँखा खुल्नासाथ उनले सोधिन केही आराम मिल्यो कि नाइ मैले मिल्यो भनेर टाउको हल्लाए फेरि उनले सोधिन कि , खाना खानुहुन्छ मलाई भोक लागेको थियो मैले भने खान्छु ” उनले फटाफट रोटी , सब्जी , दाल ,अचार , सलाद तुरुन्तै मेरो सामनेमा पस्किइन र आधा पल्टी – पल्टी मेरो मुखमा गाँस हाल्दै खुवाइन , मैले चु’पचाप खाना खाएर फेरि ढ’ल्किए श्रीमतिले मलाई आफ्नै हातले खाना खुवाएर उनी खुशी महसुस गर्दै किचनको काममा गइन म चु’पचाप सु’तीरहे र सोच्न थाले कि पुरुष पनि कस्तो हुन्छ । केहिदिन अघि मेरी श्रीमती बिरामी पर्दा मैले केही पनि गरिन यहाँसम्म कि एक कल फोन गरेर पनि खबर सोधिन उनले पुरैदिन केही खाएकी थिइन ,तर मैले उनलाई ब्रेड पस्किएर आफैलाई गौ’रवान्वित महशुस गरीरहेको थिए
महिलाहरूले दिनमा ब्रा र पे’न्टी अनिवार्य लगाउने र राति खोल्ने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने बिभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । भित्री व’स्त्र खोलेर सुत्नुका केही फाइदा आराम हुन्छ- ब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा रक्तसञ्चार र श्वा’सप्रश्वा’समा अव’रोध सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा शरीरका कोषमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन र न्युट्रिसन्स पुग्न पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर थकित हुन्छ । तसर्थ खोलेर सुतेमा अारमा मिल्छ। पसिना आउँदैन- सुत्दा पसिना आउने गरेको छ भने भित्री व’स्त्र खोलेर सुत्नाले पसिना कम आउँछ । दा’ग बस्दैन- ब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा इलास्टिकले छालामा रातो दाग लगाउँछ । पछि यस्तो दाग कालो बन्न पुग्छ । गर्भ’वती अथवा स्त’नपान गराउने महिलाले भने सुत्दा खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । गहिरो निद्रा- ब्रा र पे’न्टी खोलेर सुत्दा गहि’रो निद्रा पर्छ । किनकि, यसरी सुत्दा शरीरल
भोल कस्तो रहला यहाँको दिन? श्री पाथीभरा माईको दर्शन गरी भोलिको राशिफल हेर्नुहोला।
वि.सं.२०७७ असार -२१,आइतवार, ई.सं.२०२० जुलाई – ५, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० दिल्लाथ्व,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,आषाढ शुक्लपक्ष तिथि-पूर्णिमा , १०:०३ बजे उप्रान्त प्रतिपदा,नक्षत्र-पूर्वाषाढा , २३:४१ बजे उप्रान्त उत्तराषाढा,योग-ऐन्द्र , २४:०० बजे उप्रान्त वैधृति, करण-वव १०:०३ बजेदेखि वालव , २१:३७ बजे उप्रान्त गर,चन्द्रराशि-धनु,आनन्दादि योग-शुभ, सूर्योदय-५:१५, सूर्यास्त- १९:०२, दिनमान -३४ घडी २७ पला, व्रत/पर्व-गुरुपूर्णिमा, गुरु व्यास जयन्ती,दक्षिणामूर्ति पूजा, मन्वादि, दिल्ला पुन्ही, मानस व्रत प्रारम्भ, भक्तपुरमा वीरनदी स्नान। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – पढाई लेखाई अरु दिन भन्दा सुध्रिएर जाने हुँनाले नतिजा तपाईकै पोल्टोमा पर्नेछ । भाग्यले साथ दिने हुँदा थोरै लगानिबाट प्रशस्त आम्दानि हुँने तथा सानु प्रयत्नले ठुलो काम बन्नेछ । पुराना साथिभाई सँग भेटघाट गरि नँया योजना प्रस्तुत गर
बालुवाटारमा मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न, ‘अब तपाईंहरु कता ?’
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता संकटमा परेको बताएका छन्। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सरकारमा सहभागी सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँग राष्ट्रियता र पार्टी एकता दुवै संकटमा परेको भन्दै आफ्नो कित्ता छुट्याउन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। ‘यतिबेला राष्ट्रियता र पार्टी एकता संकट परेको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘अब तपाईंहरु कुन पक्षमा हुनुहुन्छ आफ्नो कित्ता छुट्याउनुहोस्।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवस्थामा जतिबेला जे पनि हुन सक्ने भन्दै मन्त्रीहरुसँग बालुवाटारमा पार्टी नै रहन नसक्ने ब्रिफिङ गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पार्टी एकता दुई अध्यक्षले गरे
यस कारण नेपाली हिरोइन धेरै समय टिक्दैनन्
नेपाली फिल्ममा हिरोइन बन्ने प्रक्रिया के हो ? आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । सेतो पर्दामा अनुहार देखाउने रहर र महत्वकांक्षाले थुप्रै युवती हरेक वर्ष फिल्म क्षेत्रमा हाम्फाल्छन् र डुब्छन् । कतिपयले त यौ न शो षणदेखि दुव्र्यवहार र हदैसम्मको बदनामी पनि बेहोर्नुपर्छ । नयाँ हिरोइनहरूले पारिश्रमिक नपाउने, पाए पनि साह्रै कम पाउने, विभिन्न सम्झौता गर्न बाध्य पारिनेजस्ता पीडा खेपेका हुन्छन् । खराब नियतको फन्दामा पनि पर्छन् । निर्माता/निर्देशकहरू किन नयाँ–नयाँ हिरोइनको खोजीमा हुन्छन् ? किन उनीहरूलाई फिल्ममा दोहोर्याइँदैन ? भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण धेरै फिल्म नबनिरहेको यो वर्ष पनि १२ जना भन्दा बढी नयाँ हिरोइन देखिसके गत वर्ष नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भित्रिएका २० जनाभन्दा बढी हिरोइनमध्ये शिल्पा पोखरेल, रिश्मा गुरुङ र आश्मा डिसीमात्रै दोहोरिएका छन् । बाँकी हिरोइन किन फिल्म क्षेत्रमा आए र किन
विश्वकै पहिलो सुनको होटल भियतनामको राजधानी हनोईमा खुलेको छ। उक्त होटलका दरवाजा, कप, टेबल, ढोका, बाथरुम, खाने भाडाकुँडा लगायत सबै कुरा सुनका रहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। २ जुलाई अर्थात बिहिबार यो होटलको उद्घाटन गरिएको हो'। उक्त होटलको नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक राखिएको छ। होटलका गेट देखि चिया खाने कपसम्म सबे सुनका छन्। २५ तले उक्त होटल फाइभ स्टार होटल हो। होटलमा ४ सय कोठा छन्। होटलको बाहरी भित्तामा करिब ५४ हजार वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाइएको समाचार एजेन्सी एपीले जनाएको छ'। होटल स्टाफको ड्रेस कोड रातो र सुनौलो राखिएको छ। होटल भित्र पस्ने मानिसलाई सुनौलो महसुस होस भनेर सबै कुरा सुनका बनाइएको। बाथरुम देखि नुहाउँने सबै सामानहरु सुनौलो छन'। बेडरुममा फर्निचरका सबै सामान सुनौला राखिएको छ। छतमा इन्फिनिटी पूल बनाइएको छ। जहाँबाट हनोई शहरको रौनक
महिला र पुरुषको विचको सम्बन्धको शुरुवात सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । महिला सामान्यतया पुरुषमा केही कुरा खोज्छन् । यी कुरा पाए भने महिला पुरुषसँगको सम्बन्धमा खुशी र सन्तुष्ट रहन्छन् । के कुरा चाहन्छन् त पुरुषमा महिला ? मुस्कान– राम्रो लुक र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे । लुक र आकर्षण– हुन त दीर्घ सम्बन्धमा स्वभाव प्रधान हुन्छ तर आफ्नो पुरुषको आकर्षक लुक र ब्यक्तित्व पनि महिलाको चहाना हो । पुरुषको स्किन कलरले समेत महिलालाई प्रभाव पार्ने कुरा भएको बताइन्छ । स्वभाव– कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ । एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्
म संगै अस्ट्रेलिया जाने स’गै बस्ने जि’वन साथी चाहियो मेरो पुरा वि’वरण हेरी स’म्पर्क गर्नुहोस् !
म संगै अस्ट्रेलिया जाने संगै बस्ने जिवन साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् !म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु । मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गरर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे । मेराे लगभग उमेर पनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, र बा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २२ बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजे तर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर अ